Akhri Qaybtii 5aad ee Ka Hortagga Khatarta Dabka : Diyaariye Sareeye Guuto: Axmed Maxamed xassan (Sawaxili) |
Akhri Qaybtii 5aad ee Ka Hortagga Khatarta Dabka : Diyaariye Sareeye Guuto: Axmed Maxamed xassan (Sawaxili)
Sababta guruhu u dumaan markey gubtaan aad ayey u fara badanyihiin, haddiise aynu tusaaleyaal gaaban kasoo qaadano guud ahaan marka guryaha la dhisaayo waxaa loo baahanyahay in loogu sii tala galo iney iska xejiyaan wax alaaliyo wixii dhibaata ahee sida haddii u dab qabsada, dhul gariir u dhaco, duufaan yimaado, ammaseba daad xoog badani soo rogmado.
Markaas waa in loo foojignaada nooca qalabka dhismaha ee la isticmaalaayo ammaseba guryaha lagu dhiso iyo in ay lahaadaan xoogaga ay isaga xejiyaan waxyaabaha anu soo sheegney.
Hadaba, iyedoo intaasoo arrimood iyo in ka badanba ay jiraan ayaa guryaha waxaa looga baahanyahay iney iska xejiyaan arrimahan soo socda:
Guryuhu waa iney yeeshaan xooga loo yaqaano (Dead Load) oo ah xooga dhismuhu uu iskii isku hayo ammase isku xejiyo iyedoon weli qalab kale ammaseba alaabta guryaha la dhigto la keenin, dadkuna soo degin.
Waxaa jirta oo kale guryhu waa iney lahaadaan adkeysi loo yaqaano (Impose Load) oo u kala qaybsama laba: wax afka qalaad lagu yidhaahdo (Static Load) oo ah culeyska iyo xooga ay xamuulku la yimaadaan ammaseba ay kusoo kordhiyaan qalabka kala duwane guryaha lagu rakibo, sida qalabka hawada qaboojiya, kabadhada waaweyn, talaajadaha oo dhammaantood meesha la dhigo muddo ololaaya.
Waxaa iyena jirta wax afka qalaad loogu yaqaano (Life Load) oo ah culeyska dadka guriga ku nool ammaseba soo gala hadana ka baxa iyo haddii ay alaab sittaan miisaankooda.
Waxaa jira oo kale wax afka qalaad loogu yaqaano (Wind Load) oo ah xoogga dabeysa iyo duufaanada.
Taliyaha Ciidanka Dabdemiska Qaranka.